Xog Muujisay Sida Dadka Adduunku U Kala Filasho Wanaagsan Yihiin Rajada Mustaqbal Iyo Soomaalida Iyo Pakistanta Oo Noqday Kuwa Ugu Filasho Xun!! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Xog Muujisay Sida Dadka Adduunku U Kala Filasho Wanaagsan Yihiin Rajada Mustaqbal...
Shacabka wadanka Sucuudi Carabiya ayaa noqday shacabka ugu filashada wanaagasan dhinaca rajada musatqbal marka laga hadlayo sida ay mustaqbalka u arkaan iyo waxa ay ka filanayaan shucuubta kale ee Carabta ahi. Shacabka Sucuudigu waxa ay dhinaca shucuubta adduunkana ka galeen kaalinta 12aad daraasaddii ugu dambaysay ee dabayaaqadii sannadkan 2015 laga diyaariyay sida ay shucuubta adduunku ugu kala duwan yihiin aragtida ay ka qabaan iyo waxa ay ka filan karaan noloshooda mustaqbal.
Wadanka Jarmalka ayaa heer caalami ahaan noqday dalka ugu horreeya dhinaca filashada wanaagsan iyo rajada habboon ee mustaqbal, waxaana kaalinta labaad ku jira dadka wadanka Switzerland halka ay dadka Japanese-ka ahi ku jiraan kaalinta saddexaad. Kaalmaha afraad ilaa 12aad ee heer caalami ayay dadku sidan u kala filasho wanaagsan yihiin: Kaalinta afraad: Britain, kaalinta shanaad: Faransiiska, Kaalinta lixaad: Australia, kaalinta toddobaad: Austria, Kaalinta siddeedaad: Holland, Kaalinta sagaalaad: Brazil, Kaalinta 10aad: Belgium, Kaalinta 11aad: United States of America, halka dadka Sucuudigu ka galeen kaalinta 12aad ee heer caalami iyaga oo sidaa ku noqday shacabka Carbeed ee ugu filasho wacan marka aynu ka hadlayno sida shucuubta adduunku u kala filasho wanaagsan yihiin arrimaha mustaqbal ee noloshooda la xidhiidha iyo sida ay u arkaan waayaha ku soo fool leh. Waxa xusid mudan in daraasaddan lagu sheegay in shacabka wadanka Pakistan noqdeen dadka ugu filashada mustaqbal liita waxaanay hal kaalin ka dambeeyaan Soomaalida ku nool dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya.
Daraasaddan oo aad loogu bogay macluumaadka xeesha dheer ee ay ka muujinayso sida shacabka adduunka ku nooli u arkaan ama ka filan karaa waxa ay mustaqbalka filan karaan oo dhinaca wanaagsan ah waxa diyaariyey laba cilmi baadhe oo la kala yidhaa Tobias Pres iyo Helen Susanah oo daraasaddan ku hawlanaa muddo sagaal bilood ah. Labadan cilmi baadhe waxa ay daraasaddoodan si mug leh ugu daraaseeyeen sida dadka adduunka ku nooli ay ugu kala duwan yihiin dhinaca filashada ama waxa ay musatqbalka ka rajaynayaan. Dad badan oo dunida ku nooli waxa ay u qabsameen kuwo aan rajo wanaagsan ka lahayn mustaqbalkooda nololeed iyo kuwo aad rajadoodu u sarrayso oo aaminsan in ay waajahayaan nolol ka wanaagsan kana nabdoon tan ay ku sugan yihiin. Cilmi baadhayaashani waxa ay xuseen in aanay dhaqaale ku xidhnayn in qofku fisho nolol wanaagsan balse ay soo baxeen dalal shacabkoodu hodan yahay balse aan rajo wanaagsan ka qabin waxa ay mudan doonaan mustaqbalka. Hannaanka daraasaddan loo diyaariyay waxa ka mid ahaa in baadhitaan lagu sameeyey waxyaabaha ay dadka adduunka ku nooli internetka ka baadhaan taasi oo lagu ogaaday in shacabka wadanka Jarmalku noqdeen kuwo inta badan internetka ka baadha aqoon la xidhiidha filashada wanaagsan ee mustaqbalka. Baadhitaanka labadan cilmi baadhe sameeyeen waxa iyana ka soo baxay in dalalka Pakistan, Soomaliya iyo Afghanistan noqdeen kuwa shacabkoodu aanay rajo wacan ka muujin noloshooda mustaqbal. Akhriste ma odhan karnaa dadka Soomaalida waxa ay daraasaddani ka markhaati kacday sida ay u saluugaan waxa ay mustaqbalka mudan doonaan maadaama ay leeyihiin hal-kudheg odhanaya: “Shalay Dhaantay”.